Ikhaya Lomlando Kanokusho elinePool kanye neChibi elizimele - I-Airbnb
Ikhaya Lomlando Kanokusho elinePool kanye neChibi elizimele
Derbyshire, England, i-United Kingdom
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Elizabeth
Indawo ewumlando enomlando enawo wonke ama-mod cons afaka indawo yokubhukuda eshisayo nekhishi elingaphandle.
Indawo ehlakaniphile futhi evikelekile ilungele labo abafuna ubumfihlo nokunethezeka.
Eduze kwaseBirmingham naseNottingham. Eduze ne-NEC, i-Donington Raceway, i-Alton Towers, i-Conkers, i-East Midlands kanye ne-Birmingham Airports.
Leli hholo elihle lesiNgisi elidala liyindawo kanokusho eDerbyshire eduze kwaseBirmingham, Nottingham naseDerby.
Le ndawo ihlanganisa izakhiwo ezingokomlando nokuphila kwesimanje, igcina izici zenkathi ekhangayo ngokuvuselelwa okunethezeka. Ikhishi lohlelo oluvulekile olukhanyayo line-Aga kagesi kahhavini engu-5, kanye nekhishi langaphambi kwezivakashi elinabapheki abazimele.
Igumbi lokudlela elisemthethweni elingokomlando ligcina iphaneli yalo yoqobo yelineni ye-oki ehlanganiswe nelineni kanye netafula lokuqala elihlala izivakashi ezingu-16. Igumbi elihle lephathi yesidlo sakusihlwa.
Ifakwe okusawolintshi okuhle libalele, indawo yokubhukuda eshisayo eshisayo nevulandi, ikhishi elingaphandle elinohhavini we-pizza we-Valoriani wangempela kanye nebha yangaphandle engamamitha angu-4 ubude yokudlela le ndawo iyingqayizivele ngempela.
Inikeza ukuqonda okuphelele kubavakashi abanesikhala sokumisa ibhanoyi elinophephela emhlane ukuze kuqinisekiswe ubumfihlo bakho kanye nokukhululeka kohambo lokuya emsebenzini.
Ichibi elizimele kanye namahektha ayi-10 ezingadi kufaka phakathi ihlathi elizimele. Imishini yokudlala yezingane ihlanganisa amaswing kanye ne-trampoline.
Umzanyana uyatholakala ngokugadwa izingane kanye nenkonzo yokugcinwa kwendlu enobuhlakani kanye nenketho yompheki ozimele.
I-HDTV engu-55" ene- ikhebula ye-premium, I-Netflix, Apple TV, Disney+, I-Amazon Prime Video, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
ubusuku obungu-7 e- Derbyshire
Le ndawo itholakala esigodini esincane, esaziwayo, saseNgilandi.
Singahlinzeka ngensizakalo yokugcina indlu noma usekelo lwekholi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Derbyshire namaphethelo